Sulforaphane, fantatra ihany koa amin'ny hoe "dl-sulforaphane", dia zavamaniry voajanahary hita ao amin'ny legioma misy karazana toy ny …… ..
SKU: 97-07-5 Sokajy: Uncategorized
Application Ny sosona Sulforaphane dia mihatra amin'ny famatsiana fanampiny.
Sulforaphane, fantatra koa amin'ny hoe "dl-sulforaphane", dia zava-maniry voajanahary hita ao amin'ny legioma crucoli maro toy ny broccoli, laisoa, cauliflower ary kale.
Azo antoka ny Sulforaphane rehefa ampiasaina amin'ny sakafo hita ao amin'ny sakafo. Saingy tsy ampy ny fampahalalana azo fantarina raha azo antoka ny vava ho fanafody.
-Sulforaphane afaka manomboka manomboka ny rafitra fanasitranana ny vatana, rafitra detoxification, fametrahana ireo taova anaty dimy, ny fifandanjana, ny fanamboarana ireo taova simba, ny sulforaphane dia misy ny fiantraikany amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny gota.
-Sulforaphane azo ampiasaina anaovana anti-homamiadana. Sulforaphane dia mahomby miaro amin'ny fery gastric, gastritis atrophic miova amin'ny homamiadana gastric
Ny NADH dia endriky ny fiakan'ny nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), endrika coenzyme mavitrika amin'ny zavatra simika iray sy otrikaina B3 ……….
Ny Rohan 9-Methyl-9H-beta-carboline dia vinaingitra fanta-daza amin'ny monoamine oxidase A sy ...... ..
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) dia cofactor manampy ny metabolism hita ao amin'ireo sela velona rehetra. Misy endrika roa …….